कार्यक्रममा सहभागीको विचार | गृहपृष्ठ
Home न्यूबिज बिजनेश स्कूल अवार्ड २०१८ कार्यक्रममा सहभागीको विचार
अवार्डले थप ऊर्जा दिएको छ
रमेशकुमार चौहान, कार्यक्रम निर्देशक
एस इन्ष्टिच्यूट अफ म्यानेजमेण्ट
हाम्रो मुख्य आधारभूत दर्शन ‘कम्पिट विथसेल्फ एण्ड को–अपरेट विथ अदर्स’ हो । खासगरी हामी अन्य इन्ष्टिच्युट तथा कलेजसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैनौं । तर, जुन किसिमको अवार्ड यसपटक मिलेको छ, यसले थप ऊर्जा पक्कै पनि दिएको छ । बिजनेश कलेज र बिजनेशबीचको अन्तरसम्बन्ध बलियो बनाउन विभिन्न प्रयास भएका छन् । जस्तो कि उद्योगबाट आउने प्रोफेशनलहरूलाई फ्याकल्टी मेम्बरको रूपमा आमन्त्रण गर्छाैं । उहाँहरूले नै विद्यार्थीसँग क्लास लिनेलगायत काम गर्नुहुन्छ । यसको अलावा उद्योग/प्रोफेशनलहरूसँगको सहकार्यमा विभिन्न क्रियाकलाप गर्न सकिन्छ, उहाँहरूको अनुभवबाट पनि धेरै विषय थाहा हुन्छन् । विगतका वर्षमा भन्दा यो वर्ष हामीले निकै राम्रो सुधार गरेका छौं ।
शिक्षा क्षेत्रमा कर्पोरेटको जस्तै विकास हुनुपर्छ
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)
पूँजीबजारमा प्रवेश गर्नेहरूमा व्यवस्थापन सङ्कायका विद्यार्थीको बाहुल्य हुन्छ । नेपालको शिक्षा निश्चित समूहको बलमा मात्र सञ्चालन भएको छ । शिक्षा क्षेत्र कर्पोरेट जस्तै विकास हुनुपर्छ । कर्पोरेट अवधारणामा आधारित भएर पब्लिक र प्रमोटरको सहभागिता हुनुपर्छ ।
शैक्षिक सङ्गठन पनि पब्लिकमा शेयर इस्यू गरेर जानुपर्छ, जसले आगामी दिनमा शैक्षिक सङ्गठनलाई कर्पोरेटमा जान मद्दत गर्छ । शिक्षा क्षेत्र पनि एउटा रियल सेक्टर हो । यसले भोलि फड्को मार्न सक्छ । यसले भोलिको दिनमा पूँजीबजारमा प्रवेश गर्न शिक्षा क्षेत्रका लागि बाटो खुला हुनेछ जस्तो लाग्छ । पहिला मैले व्यवस्थापन सङ्काय अध्ययन गर्दाको पाठ्यक्रमभन्दा अहिले विभिन्न विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा पूँजीबजारबारे केही विषय समेटिएका छन् । यसले पूँजीबजारमा प्रवेश गर्न विद्यार्थी उत्साहित हुन सक्छन् ।
पूँजीबजारलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न सहयोग
अध्यक्ष, नेपाल धितोपत्र बोर्ड
अरू देशमा सरकारले नै रेटिङ गर्छ । तर, नेपालमा निजी क्षेत्रबाट न्यू बिजनेस एजले उदाहरणीय काम गरेको छ । यसले कलेजहरूलाई प्रोत्साहन दिने कुरामा विश्वास छ । यो अवार्डको विशेषता भनेकै वर्षेनि पारदर्शी हुँदै विवादरहित रूपमा चारओटा संस्करण गर्नु हो । यो अवार्डले गर्दा कलेजहरूलाई राम्रो र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रोत्साहन दिन्छ । कलेजहरू र बैङ्किङ संस्थाबीच सुमधुर सम्बन्ध छैन । तर, अब भने बैङ्कहरू कलेजसँग सुमधुर सम्बन्ध राखेर हिँड्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
अवार्डले शैक्षिक संस्थालाई हौसला बढेको छ
निर्देशक, शर्मा एण्ड कं.
यो कार्यक्रमले धेरै खुशी छु । नेपालका दुर्गम तथा सुगम क्षेत्रमा कस्ताकस्ता शैक्षिक संस्था खुलेका छन् भनेर धेरैलाई थाहा छैन । अवार्डले शैक्षिक संस्थालाई हौसला बढेको छ । विद्यार्थीलाई पनि हौसला दिएको छ । शिक्षा र उद्योगबीच तालमेल मिलाउन सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सरकारले निगरानी गर्नुपर्छ । नेपालको शिक्षा सुधारका लागि विद्यार्थी, सरकार, अभिभावक र शिक्षण संस्थाबीच मिलेर सामूहिक निर्णय गरी नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । कलेजहरूले एकतर्फी रूपमा गरिरहेको कामलाई निर्धक्क रूपमा छोड्नु हुँदैन ।
विदेशमा पढाइने शैक्षिक संस्था नेपालमै रहेको सन्देश दिएको छ
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसङ्घ
लक्की ग्रूपका अध्यक्ष
समग्र रूपमा हेर्ने हो भने यसले उद्योगलाई भन्दा पनि शिक्षा उद्योगलाई प्रश्रय दिएको छ । नेपाली विद्यार्थी विदेशमा पढ्न गइरहेको अवस्थामा नेपालमै यस्ता स्तरीय शैक्षिक संस्था छन् भनेर यसले सन्देश दिएको छ । उद्योगमा मानव संसाधक, व्यवस्थापकलगायत अन्य जनशक्ति नेपालकै बिजनेश स्कूलबाट छनोट गरेर लिन सकिन्छ ।
गुणस्तर सुधारमा प्रतिस्पर्धा बढाउँछ
प्रतापजङ्ग पाण्डे, प्रबन्ध निर्देशक
कैलाश हेलिकोप्टर सर्भिसेस प्रालि
न्यू बिजनेश एज प्रालिले आयोजना गर्दै आएका यस्ता कार्यक्रमले व्यवस्थापन विषयका कलेजलाई गुणस्तर सुधारका लागि प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाएको छ । यो अत्यन्तै सराहनीय काम हो । विगतमा यस्ता कलेज प्रायः काठमाडौं केन्द्रित हुने गरेकोमा यसपटक उपत्यकाबाहिर र प्रदेशस्तरबाट पनि उल्लेख्य सहभागिता हुनु उत्साहको कुरा हो । यसले गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनलाई बल पु¥याइरहेको छ । तथापि, शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष नभएका होइनन् । त्यसलाई सुधार्दै लैजानुपर्छ । अहिलेसम्म राजधानीमा भइरहेको यो कार्यक्रमलाई न्यू बिजनेश एजले आगामी दिनमा प्रदेशस्तरमा लैजान सक्यो भने थप प्रभावकारी हुने थियो ।
बिजनेश कलेज र व्यवसायबीचको अन्तरसम्बन्ध बलियो बनाउँछ
नेश्फिल्ड इण्टरनेशनल कलेज
यस्ता खालका सम्मानले कलेजको व्यवस्थापनदेखि पूर्वाधार र फ्याकल्टिजसम्म सबै पक्षमा प्रगति गर्ने उत्साह मिल्छ । बिजनेश कलेज र वास्तविक व्यवसायबीच अन्तरसम्बन्ध बलियो बनाउन हामीले विभिन्न कर्पोरेट हाउससँगको सहकार्यमा विद्यार्थीलाई व्यावहारिक ज्ञान दिइरहेका छौं । यसले दक्ष तथा शीप भएका जनशक्ति उत्पादन गर्नुका साथै देशको विकासमा सहयोग गर्नेछ । यो अवार्ड निकै सराहनीय छ । तर, यसमा निश्चित खालका कलेजलाई मात्र समावेश नगरेर नेपालमा भएका सबैखाले कलेजलाई समावेश गरिएको भए बेश हुन्थ्यो ।
प्रदेशअन्तर्गत पनि क्याटेगोरीमा कलेज छानियोस्
साउथ एशियन स्कूल अफ टूरिजम एण्ड होटल म्यानेजमेण्ट (सास्थम)
न्यूबिज बिजनेश स्कूलजस्तो सम्मानित अवार्डमा देशभरका उत्कृष्ट १० बीएचएम कलेजमा पर्नु निकै गौरवको कुरा हो । निजीक्षेत्रले शिक्षा क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानले सरकारको ठूलो लगानी र विदेशिने ठूलो धनराशि जोगिएको छ । यो कुरालाई मनन गर्दै सरकारले सहयोगका कार्यक्रम गर्नुका साथै यस्तै खालका छनोटका कार्यक्रम पनि गर्नु आवश्यक छ । यस वर्षदेखि प्रदेशस्तरको उत्कृष्ट कलेज छनोट थालेको न्यू बिजनेश एज प्रालिले आगामी वर्षदेखि प्रदेशबाट पनि विभिन्न क्याटेगोरीमा कलेज छनोट गरोस् भन्ने सुझाव छ ।
बैङ्कहरूले कुशल र योग्य जनशक्ति खोजिरहेका छन्
एनएमबी बैङ्क लिमिटेड
न्यूबिज बी–स्कूल रेटिङ–र्‍याङ्किङ पुरस्कार एक महत्त्वपूर्ण पुरस्कार हो । साथै, यो बैङ्किङ उद्योगका लागि महŒवपूर्ण कार्यक्रम पनि हो । यस प्रकारको कार्यक्रमले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू र व्यवस्थापन कलेजहरूबीच आवश्यक पर्ने जनशक्तिबारे छलफल गरे फाइदाजनक हुन सक्छ ।
जसले गर्दा दुवै संस्थालाई एकसाथ जोड्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । अहिले नेपाली बैङ्किङ क्षेत्रमा मानव पूँजी (ह्युमन क्यापिटल)का स्रोतहरू व्यवस्थापन गर्न एउटा प्रमुख चुनौती छ । बैङ्किङ क्षेत्रमा काम गर्न प्रतिस्पर्धा बढ्न थालेको छ । यद्यपि, बैङ्कहरूले व्यवस्थापन कलेजबाट कुशल र योग्य तथा दक्ष जनशक्ति खोजिरहेका छन् ।
औद्योगिक सम्बन्ध सुधार्न कलेजहरूले प्रयास जारी राख्नुपर्ने
डा. नरबहादुर विष्ट
अवार्ड पाउनु गौरवको कुरा हो । अवार्डको गरिमा कायम राख्नु जिम्मेवारी पनि हो । यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो । औद्योगिक सम्बन्ध सुधार्न कलेजहरूले प्रयास त गरि नै रहेका छन् । तर, नेपालमा उद्योगको सङ्ख्या कम छ । जति उद्योग छ, त्यहाँ पनि अरूमा उद्यमशीलता विकास गराऔं भन्ने भावना खासै छैन । आ–आप्mनै व्यवसायमा व्यस्त हुने प्रवृत्ति छ, जसले गर्दा एक खालको सम्बन्धगत अन्तर छ । तर, नयाँनयाँ बिजनेश स्कूल/कलेजले भने यो अन्तर भर्न हरेक साता उद्योगीलाई अतिथि लेक्चररका रूपमा बोलाउने, विद्यार्थी–उद्योगीबीच अन्तरक्रिया गराउने, विद्यार्थीलाई औद्योगिक क्षेत्रको भ्रमणमा पठाउनेजस्ता काम गरिरहेका छन् ।
अवार्ड वितरणमा निष्पक्षता छ
कार्यकारी निर्देशक, एशियन फर्मास्युटिकल्स प्रालि
यो कार्यक्रम शैक्षिक क्षेत्रको उत्साहको स्रोत बनेको छ । यसले अन्य कलेजहरूलाई पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ । मोफसलका कलेज पहिचान गरी सम्मान गर्नु निकै नै सराहनीय छ । थाइल्याण्डका विद्यार्थी पनि नेपालका व्यवस्थापन कलेजमा पढ्छन् भन्ने थाहा पाउँदा धेरै खुशी लागेको छ । यसले यहाँको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि हुँदै गएको पुष्टि गर्दछ । त्यसमा न्यूबिज बी–स्कूल रेटिङ–र्‍याङ्किङ अवार्डले कलेज छनोट तथा सम्मान प्रदानमा निष्पक्षता कायम गरेको छ ।
सम्बन्ध विस्तार गर्न निष्पक्षता आवश्यक
गोल्डेन गेट इण्टरनेशनल कलेज
गत वर्ष हामीले अवार्डको होटल म्यानेजमेण्ट क्याटगोरीमा शीर्ष स्थान हासिल गरेका थियौं र यो वर्ष हामी शीर्ष १० स्थानमा पर्न सफल भएका छौं । कार्यक्रमले समयसँगै सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन गर्दै जानुपर्ने र अन्य कलेजले पनि राम्रो गरिरहेको कुरा बुझ्ने अवसर प्रदान गरेको छ । व्यावसायिक कलेज र व्यावसायिक क्षेत्रबीच अन्तर घटाउन कुनै एकको मात्र प्रयास पर्याप्त छैन । यी दुईबीचको सम्बन्ध विस्तार गर्न सरकार, शैक्षिक संस्था र कर्पोरेट क्षेत्र सबै समान रूपमा लागिपर्न आवश्यक छ । त्यस्तै, सम्बन्ध विस्तारमा निष्पक्षताको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ । आगामी दिनमा हाम्रा प्रयास थप सुदृढ गर्दै लैजानुपर्ने देखिएको छ ।
सम्मानले कलेजहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनेछ
सीईओ/अध्यक्ष, आईएसटी कलेज
विगत १५ वर्षदेखि होटल म्यानेजमेण्ट कक्षा चलाइराखेका छौं । विगतमा हामीले अवार्ड जितेका थियौं ।
यसपालि टपटेनमा पर्न सफल भएका छौं । यसले हामीलाई ठूलै हौसला मिलिरहेको छ । सम्मानले गर्दा कलेजहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।
अरूभन्दा सृजनशीलता कसरी ल्याउने र अरूभन्दा दक्ष कसरी बनाउने भनेर सोच्न प्रेरणा दिएको छ । नेपालका होटलमा ३०/३२ वर्ष पहिलेसम्म सुपरभाइजर पनि भारतीय हुन्थे । अहिले हाम्रो जस्तो कलेजका कारण नेपालीहरू नै यहाँ मात्र होइन विदेशी होटलमा पनि उच्च पदमा काम गरिरहेका छन् ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न जरुरी
कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
बैङ्किङ तथा फाइनान्स क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने गुणस्तरका विद्यार्थीलाई कलेजले विकास गर्दै गयो भने कर्पोरेट र बैङ्किङ क्षेत्रमा जनशक्तिको समस्या पर्दैन । जति पनि अहिले उत्कृष्ट कलेजलाई पुरस्कार वितरण गरियो, यस्तो उत्पादन अहिलेसम्म सिनर्जी फाइनान्समा आइपुगेका छैनन् । तर, पछि आउँछन् होला । फाइनान्स कम्पनी र बिजनेश कलेजबीच अन्तरसम्बन्ध बलियो बनाउन एकआपसमा अन्तरक्रिया हुनुपर्छ । जस्तै, हामीले पनि उनीहरूको कलेजलाई इण्टर्नसिपमा ल्याएर हामीलाई कस्तो जनशक्ति चाहिने हो, सोसम्बन्धी विषय कलेजहरूलाई राख्न भन्यौं भने बीचको दूरी हट्थ्यो कि !
बैङ्क र कलेजबीच सुमधुर सम्बन्ध राख्न आवश्यक छ
वरिष्ठ व्यवस्थापक (सिनियर
म्यानेजर–मार्केटिङ र डेभलपमेण्ट)
महालक्ष्मी विकास बैङ्क
न्यू बिजनेश एज प्रालिको यस्तो कार्यक्रमले कलेजलाई प्रोत्साहन गर्छ । अहिले खासगरी विद्यार्थी उच्च शिक्षा हासिल गर्न बाहिर जाने गरेका छन् । यो अवस्थामा कलेजलाई प्रोत्साहन गरी स्थापित गर्न यस्तो खालको कार्यक्रमले मद्दत पुर्‍याएको हुन्छ । साथै, काठमाडौं उपत्यकाभन्दा बाहिरका कलेजलाई पनि न्यू बिजनेश एजले पहिचान र सम्मान गरेको देखियो । यसले बाहिरका कलेजले पनि धेरै राम्रो गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित गरेको छ । अहिले छनोटमा परेका कलेजका एमबीएका दुई/तीनजना नयाँ विद्यार्थी हामीकहाँ प्रवेश गरेका छन् । यसैको आधारमा पनि यहाँ छनोट भएका कलेजको राम्रै छ भन्न सकिन्छ । कलेजहरू र बैङ्किङ संस्थाबीच सुमधुर सम्बन्ध छैन । तर, अब भने बैङ्कहरू कलेजसँग सुमधुर सम्बन्ध राखेर हिँड्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
बीमा विषय पढाउने कलेजलाई सहयोग गर्छौं
बीके श्रेष्ठ, डेपुटी सीईओ,
लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स
बीमा कम्पनीमा दक्ष जनशक्ति तथा दक्ष जनशक्तिको सेवाको खाँचो छ । यहाँ छनोट भएका कलेजबाट बीमा क्षेत्रमै दक्खल राखेका राम्रो गुणस्तरीय उत्पादन भने खासै पाएका छैनौं । यस क्षेत्रका लागि थोरै उत्पादन भएका पनि अरू नै क्षेत्र छनोट गरेर जाने प्रवृत्ति छ । अधिकांशको छनोट बीमाबाहेक क्षेत्रमा हुने गरेकाले यो क्षेत्र अलिकति छायामा परेको छ । बल्ल अहिले बीमा कम्पनीको सङ्ख्या बढ्न थाल्यो र प्रायःले बीमा कम्पनी राम्रो संस्था हो भनेर बुझ्न थालेका छन् ।